Samuel A Kọrọ Akụkọ Ya na Baịbụl Nọgidere Na-eme Ihe Ziri Ezi
Ndị Nne na Nna na Ụmụ Ha Na-eto Eto Ikwurịta Okwu nke Ọma
Aha ahụ Bụ́ Jehova Ò Kwesịrị Ịdị n’Agba Ọhụrụ?
Samuel Nọgidere Na-eme Ihe Ziri Ezi
ỤLỌ NCHE 2008-08-01
Ị̀ HỤTỤLA ebe ndị ọzọ na-eme ihe ọjọọ?— * Samuel hụrụ ebe ndị ọzọ na-eme ihe ọjọọ. O biri n’ebe ị na-agaghị atụ anya na a ga-anọ na-eme ụdị ihe ahụ, ya bụ, n’ụlọikwuu Chineke, ma ọ bụ ebe a na-efe Chineke ofufe, na Shaịlo. Ka anyị hụ otú Samuel si gaa biri n’ụlọikwuu ahụ n’ihe karịrị puku afọ atọ gara aga.
Tupu Hana amụọ Samuel, ọ gụsiri ya agụụ ike ka ọ mụta nwa. Mgbe Hana gara n’ụlọikwuu Chineke, o kpekuru Chineke ekpere ka o mee ka ọ mụta nwa. O kpesiri ekpere ike nke na ọnụ ya nọ na-emegharị. Nke a mere ka nnukwu onye nchụàjà, bụ́ Ilaị, chee na mmanya na-egbu ya. Ma, mgbe Ilaị matara na o nweghị mmanya na-egbu ya, kama na o nwere ihe na-enye ya nsogbu nke ukwuu n’obi, ọ gọziri ya, sị: ‘Ka Chineke Izrel meere gị ihe ị rịọrọ ya.’—1 Samuel 1:17.
E mesịa, Hana mụrụ Samuel, obi wee tọọ ya ụtọ nke ukwuu nke na ọ gwara di ya, bụ́ Elkena, sị: ‘Ngwa ngwa m kwụsịrị Samuel ara, m ga-akpọga ya n’ụlọikwuu ka o jewere Chineke ozi n’ebe ahụ.’ Ọ bụ otú ahụ ka Hana mere! Ọ ga-abụ na Samuel dị afọ anọ ma ọ bụ ise n’oge ahụ.
Ilaị emeela agadi n’oge ahụ. Ụmụ ya ndị nwoke, bụ́ Họfnaị na Finihas, anaghị efe Jehova otú kwesịrị ekwesị. Ha na ụmụ nwaanyị ndị na-abịa n’ụlọikwuu ahụ na-akwa iko. Olee ihe i chere papa ha kwesịrị ime?— O kwesịrị ịdọ ha aka ná ntị, o kwesịghịkwa ịhapụ ha ka ha mewe ihe ọjọọ niile ha nọ na-eme.
Ọ bụ n’ebe ahụ ka obere nwa bụ́ Samuel nọ na-eto, ọ ga-abụkwa na ọ ma na ụmụ Ilaị na-eme omume ọjọọ. Samuel ò sooro ha mewe ihe ọjọọ?— Mba. Ọ nọgidere na-eme ihe ziri ezi, dị ka ndị mụrụ ya kụziiri ya. Ma, Jehova wesoro Ilaị iwe. O ziri otu onye amụma ya ozi ka ọ gwa Ilaị otú ya ga-esi nye ezinụlọ ya ntaramahụhụ, karịchaa, ụmụ ọjọọ ya.—1 Samuel 2:22-36.
Samuel nọgidere na-eje ozi n’ụlọikwuu ahụ, ya na Ilaị. N’otu abalị, mgbe Samuel nọ na-ehi ụra, otu olu kpọrọ ya òkù. Samuel wee jiri ọsọ gakwuru Ilaị, ma, Ilaị gwara ya na ya akpọghị ya òkù. Ihe ahụ mere ọzọ. Ma, mgbe o mere nke ugboro atọ, Ilaị gwara Samuel ka o kwuo, sị: “Kwuwe, Jehova, n’ihi na ohu gị na-ege ntị.” Mgbe Samuel kwuru otú ahụ, Jehova gwara ya okwu. Ị̀ ma ihe Jehova gwara Samuel?—
Chineke gwara Samuel ihe O bu n’obi nke bụ́ inye ezinụlọ Ilaị ntaramahụhụ. N’ụtụtụ echi ya, ụjọ ji Samuel ịkọrọ Ilaị ihe Jehova kwuru. Ma, Ilaị rịọrọ Samuel, sị: “Biko, ezochirila m ya.” Samuel wee kọọrọ Ilaị ihe niile Jehova kwuru na Ọ ga-eme—otu ihe ahụ onye amụma Chineke gwara Ilaị na mbụ. Ihe Ilaị kwuru bụ: “Ihe ọ bụla dị [Jehova] mma n’anya, ya mee.” E mechaa, e gburu Họfnaị na Finihas, Ilaị nwụkwara.—1 Samuel 3:1-18.
N’ime oge ahụ, “Samuel nọ na-etolite, Jehova nọnyekwaara ya.” Ọ ga-abụ na Samuel dị afọ iri na ụma n’oge ahụ, bụ́ oge dị mkpa ná ndụ ndị na-eto eto. Ì chere na ọ dịịrị Samuel mfe ịnọgide na-eme ihe ziri ezi mgbe ndị ọzọ nọ na-eme ihe ọjọọ?— Ọ bụ ezie na ọ dịghị mfe, Samuel jeere Jehova ozi ma kwesị ntụkwasị obi n’oge ndụ ya dum.—1 Samuel 3:19-21.
Olee maka gị onwe gị? Ị̀ ga-adị ka Samuel ma ugbu a ma mgbe i toro? Ị̀ ga-anọgide na-eme ihe ziri ezi? Ị̀ ga-anọgide na-eme ihe Baịbụl kwuru, na-emekwa ihe papa gị na mama gị kụziiri gị? Ọ bụrụ na i mee otú ahụ, obi ga-atọ Jehova ụtọ, tọọkwa papa gị na mama gị.
^ para. 3 Ọ bụrụ ụmụaka ka ị na-agụrụ akụkọ a, akara ùhiè ndị dị n’isiokwu a na-echetara gị ka ị kwụsịtụ ma jụọ ha ajụjụ ndị ahụ.
Olee otú Samuel si malite ije ozi n’ụlọikwuu Jehova?
Olee nsogbu ndị bịaara Samuel?
Olee ihe Samuel mere nke ndị na-eto eto kwesịrị iṅomi?
mailto:?body=Samuel Nọgidere Na-eme Ihe Ziri Ezi%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2008568%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Samuel Nọgidere Na-eme Ihe Ziri Ezi